Inkosana ekhohlakeleyo | Uncwadi lwangoku
Encarni Arcoya | | Iincwadi zoLutsha
Ukuba ungumfundi osele ekhulile kwaye uyathanda amabali adlulela ngaphaya kwezothando, ama-adventures amancinci ... ke unokwazi iNkosana ekhohlakeleyo.
Ukuba awuyazi ukuba imalunga nantoni kodwa iye yabamba umdla wakho, jonga into esinokukuxelela ngayo ngayo ukuze wazi ukuba ifundeka enokuba nomdla kuwe. Ziphose kuyo?
1 Ngubani obhale iNkosana ekhohlakeleyo?
2 Loluphi uhlobo lweNkosana Ekhohlakeleyo?
3 Yintoni isishwankathelo seNkosana Ekhohlakeleyo?
4 Yintoni iNkosana ekhohlakeleyo malunga nokuba ngabaphi abalinganiswa ababalulekileyo
5 zingaphi iincwadi ezikhoyo
5.1 ukumkani okhohlakeleyo
5.2 Ukumkanikazi wento
Ngubani obhale iNkosana ekhohlakeleyo?
Umbhali kunye nengqondo yokucinga yeNkosana ekhohlakeleyo ayikho enye ngaphandle kukaHolly Black. Wayesele esaziwa ngeSpiderwick Chronicles, eyafumana ingqwalasela enkulu, ngoko wayesele enodumo. Kodwa ngale nto akazange abaphoxe abafundi bakhe.
UHolly wazalwa ngo-1971 eNew Jersey kwaye wayehlala kwindlu ye-Victorian. Akukho nto ingako yaziwayo ngobuntwana bakhe, ngaphandle kokuba waphumelela isidanga se-BA ngesiNgesi ngo-1994. Kwiminyaka emihlanu kamva watshata noTheo Black, awafumana naye unyana, uSebastian. Bonke, kunye nezinye iikati, bahlala eNew England (apho ithi kwiwebhusayithi yayo inelayibrari eyimfihlo).
La Inoveli yokuqala awayipapashayo yayingekabikho ngo-2002, ethi, The Tribute: A Modern Fairy Tale. Le ncwadi yayineendidi ezimbini ezilandelelanayo, iValiant kunye ne-Ironside.
Ngo-2004 wakhupha iThe Wrath of Mulgarath awakwazi ngayo ukuba ngoyena mntu uthengisa kakhulu. Kodwa eyona nto imphakamisele phezulu kubabhali benoveli abancinci abancinci yaba yiSpiderwick Chronicles, uthotho lweencwadi ezintlanu (nangona zimbini zokuqala kuphela ezaziwa ngakumbi ngazo).
Kwaye yaphuma nini iNkosana ekhohlakeleyo? Ibiyi ngo-2018 xa kuphuma le ncwadi yokuqala, kwalandela unyaka olandelayo ngezahlulo zesibini nezesithathu.
Ukongeza, kuyaziwa ukuba umvelisi we-Universal Imifanekiso ufumene amalungelo kwi-trilogy ukuze alungelelanise ifilimu, ngoko kuya kufuneka silinde ukuba iphila ngokweencwadi. Nangona kunjalo, iindaba zakhululwa ngo-2017 kwaye nangona kubonakala ngathi ziza kukhutshwa ngo-2018, akukho nto ingako eyaziwayo malunga nayo (kuphela ukuba umvelisi wayeza kuba nguMichael de Luca kunye nomphathi uKristin Lowe).
Loluphi uhlobo lweNkosana Ekhohlakeleyo?
Kuncwadi, Incwadi yeNkosana Ekhohlakeleyo yenziwe ngohlobo lwefantasy. Ngoba? Ewe, okokuqala, kuba yenzeka kwindawo engekhoyo kwaye ngenxa yokuba abanye abalinganiswa okanye iimeko zinamandla angaphezu kwawemvelo.
Ngaphandle kolu hlobo, sinokuthi siyifake kwifantasy ye-dystopian, kuba ubukumkani kunye noluntu kwiincwadi akukho nto ngaphandle kwe-utopian.
Yintoni isishwankathelo seNkosana Ekhohlakeleyo?
La ISinopsis yeNkosana ekhohlakeleyo, uthi:
“UJude wayeneminyaka esixhenxe ubudala xa abazali bakhe babulawayo yaye, yena noodadewabo ababini, wasiwa kwiNkundla Ephakamileyo yobuqhophololo yaseFaerie. Kwiminyaka elishumi kamva, ekuphela kwento ayifunayo uYude, nangona engumntu nje ofayo, kukuziva ngathi ungowalapha. Kodwa iiferi ezininzi zibajongela phantsi abantu. Ngokukodwa iNkosana uCardan, oyena nyana mncinane nokhohlakeleyo kaKumkani oPhezulu. Ukuze aphumelele enkundleni, uYude umele athethe naye. Kwaye ujongane neziphumo. Ngenxa yoko, uya kuzibhaqa sele ephakathi kwabantu abangafiyo, aze afumane isakhono sakhe sokuphalaza igazi.”
Kwasekuqaleni, umbhali usinika ibali elingayi kufana neentsomi okanye amabali 'alula', oko kuthetha, kodwa usibeka kwibali le-dystopian, kunye nemeko 'ekhohlakeleyo' kunye nalapho izinto azikho ntle kangako.
Yintoni iNkosana ekhohlakeleyo malunga nokuba ngabaphi abalinganiswa ababalulekileyo
Ngaphandle kokutyhila okuninzi malunga neNkosana ekhohlakeleyo, singakuxelela loo nto umlinganiswa ophambili nguJude Duarte, intombazana efayo eneminyaka eyi-17 ehlala ukusukela kwiminyaka eyi-7 kwiNkundla yaseFaerie. Ingxaki kukuba akangowelo “hlabathi” nangona elithanda yaye efuna ukungena kulo; kodwa isibakala sokuba umntu ofayo ngokungafaniyo faeries imbeka ezininzi imiqobo.
El umlinganiswa oyindoda kule meko nguCardan, oyena nyana mncinane wokumkani wenkundla yefaerie wonke umntu amphephayo ngenxa yesiprofeto esaxelwa kwangaphambili ngeshwangusha awayeza kulizisa. Umthiyile uYude ngenxa yokufa kwakhe yaye ke ngoko uzama ukubenza ubomi bakhe bube lusizi.
Ecaleni kukaJude, sinoodadewabo ababini, uTaryn noVivienne.Abalinganiswa besibini kodwa ababalulekileyo ebalini. Bonke bahluke kakhulu omnye komnye kunye nezigqibo abazenzayo kwimbali yonke imeko kaYude.
Ngokuqinisekileyo, baninzi abalinganiswa ababalulekileyo abaxhasayo abanxulumene ngandlela-thile noJude okanye uCardan.
Ngokungafaniyo nezinye iincwadi zentsomi, apho ilizwe abalimeleyo libonakala lingenamsebenzi, UHolly Black wayesekelwe kwintsomi yemveli malunga neefairies, apho ezi zimnyama, ezinobundlobongela, amaxoki, amasela, njl. Yiyo loo nto inoveli yeNkosana ekhohlakeleyo inomoya omdaka kunye neyelenqe elinzulu nelixineneyo.
Ewe, lufundo lolutsha, ukusuka kwi-15-16 leminyaka ubudala.
zingaphi iincwadi ezikhoyo
Umthombo: amagama ambalwa
Ukuba ungomnye wabo bathanda iincwadi ezinde, ezifana neebhayoloji, iitrilogies, i-sagas, njl. emva koko uya kuzithanda ezi ncwadi. Kwaye kunjalo INkosana Ekhohlakeleyo yincwadi yokuqala kwitrilogy ebizwa ngokuba ngabaHlali basemoyeni. Kukho ezinye iincwadi ezimbini esele zipapashiwe ezigqibezela ibali likaYude.
Ngokukodwa, uya kuba:
Phambi kokuqhubeka nokufunda siyakulumkisa. Nangona siza kubeka i-synopsis yeenoveli, ukuba awufuni ukufumana nayiphi na i-spoilers, kungcono ukuba uyitsibe kuba ngaloo ndlela uyakuphepha ukwazi ukuba ibali liza kuya phi xa ungekafundi yonke into. iincwadi.
La Isishwankathelo sisixelela:
"UYude kufuneka amgcine ekhuselekile umzalwana wakhe, kwaye ukwenza njalo ubambisene nokumkani okhohlakeleyo, uCardan, kwaye abe ngumnini wenene wamandla eCrown. Ukuhamba kulwandle lokungcatshwa rhoqo kwezopolitiko kunzima ngokwaneleyo, kodwa uCardan, ngaphezu koko, kunzima kakhulu ukulawula. Wenza konke anokukwenza ukuze ajongele phantsi uYude, nangona ukuthabatheka kwakhe kuye kuhlala kunjalo. Xa kucaca ukuba umntu osondeleyo kuJude uceba ukumngcatsha, ebeka ubomi bakhe kuphela emngciphekweni kodwa ubomi babo abathandayo kakhulu, uYude kufuneka atyhile umngcatshi, alwe neemvakalelo zakhe ezintsonkothileyo zikaCardan, kwaye agcine ulawulo lwefaerie. nangona kuyingozi ukufa."
Ukujonga isishwankathelo sakho, encwadini uya kufumana isiphelo setrilogy, kunye nebali likaYude.
“Ukumkanikazi oswelekileyo waseFaerie, uJude, akanamandla kwaye usaxakwa kukungcatshwa kwakhe. Kodwa uzimisele ukubuyisela yonke into ethathiweyo kuye. Kwaye ithuba lakhe liza xa udadewabo uTaryn ecela uncedo lwakhe kuba ubomi bakhe busengozini. UJude kufuneka abuyele kwinkundla yobuqhophololo yaseFaerie ukuba uya kusindisa udade wabo. Kodwa uElfhame akafani nangaphambi kokuba uJude ahambe. Imfazwe isemnyango. Kwaye uYude kuya kufuneka angene kumhlaba wotshaba ukuze aphinde aqalise ukudlala ngamandla okuphalaza igazi lokungafiyo. Kwaye xa kukhululwa isiqalekiso esinamandla kwaye uloyiko lusasazeka, uJude kufuneka akhethe phakathi kokuzalisekisa amabhongo akhe okanye ukugcina ubuntu bakhe ...
Ngaphandle kwezi ncwadi, eziya kuba trilogy esemthethweni, kuyinyaniso ukuba umbhali ukhuphe ezinye iincwadi ezinxulumeneyo. Umzekelo:
Ukumkani wase-Elfhame wafunda njani ukuthiya iintsomi. Ngaphambi kokuba abe yinkosana ekhohlakeleyo okanye ukumkani okhohlakeleyo, uCardan wayeyi-faerie encinci enentliziyo yamatye. UHolly Black usinika ukuqonda okunzulu kubomi obumangalisayo buka-Elfhame onguKumkani oPhezulu omangalisayo, uCardan. Eli bali libandakanya iinkcukacha ezimnandi zobomi bakhe phambi kweNkosana Ekhohlakeleyo kunye ne-adventure engaphaya kwe-Queen of Nothing, kunye namaxesha asondeleyo, anamava kuwo onke abahlali kwi-saga yoMoya, echazwe kwimbono kaCardan.
oodade abalahlekileyo. Ngamanye amaxesha umahluko phakathi kwebali lothando kunye nebali eloyikisayo kulapho ukuphela kufika khona ... Ngoxa uJude elwela amandla kwiNkundla ye-Elfhame ngokumelene neNkosana ekhohlakeleyo uCardan, udadewabo uTaryn waqala ukuthandana noLocke okhohlisayo. Inxalenye yokuxolisa kunye nenxalenye yenkcazo, kwavela ukuba uTaryn uneemfihlo zakhe ezimbalwa zokutyhila.
Ukutyelela kumazwe angenakwenzeka. Sisipho uHolly Black ngokwakhe awasinika abo bathenga le ncwadi kwindlu yokushicilela yaseHidra. Yayibalisa ibali elifutshane labemi basemoyeni kwaye yasetyenziswa njengokukhuthaza le ncwadi.
Ngoku uyazi yonke into ngeNkosana Ekhohlakeleyo kunye nebali oya kulifumana kwincwadi. Kufuneka uyifunde kuphela ukuba awuyenzanga loo nto okanye usixelele ukuba ubucinga ntoni ukuba sele uyifundile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Iincwadi zoLutsha » Inkosana ekhohlakeleyo
UMiriam Imedio. Udliwano-ndlebe nombhali wesona Siqithi sikude kakhulu eHlabathini
UFelix omkhulu. Isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe. ukhetho lwemibongo